Sonos आर्कको विश्लेषण, बजारको सब भन्दा पूर्ण ध्वनी बार आईफोन समाचार
लुइस प्याडिला | | Apple TV, धेरै
Sonos आफ्नो Sonos आर्क को साथ पट्टी धेरै उच्च सेट गरेको छ, हामीलाई उत्तम ध्वनि, डोल्बी एटमस, प्रस्ताव गर्न डिजाइन गरिएको ध्वनि बार जुनमा हामीले अन्य धेरै सुविधाहरू थप्नु पर्छ कुनै एक श as्का बिना यो एक को रूप मा राख्नुहोस् उत्तम ध्वनि बार.
1 निर्दिष्टीकरण र डिजाइन
2 टिभी जडान
3 तपाईंको घरमा सिनेमा ध्वनि
4 अमेजन अलेक्सा, गुगल सहायक र एयरप्ले २
5 तपाइँको Sonos आर्क मा संगीत
निर्दिष्टीकरण र डिजाइन
यो साउन्डबारसँग ११ dimen सेमी लम्बाइको ठूलो आयाम छ, जसले ठुलो ठूलो टेलिभिजनको अगाडि राख्नको लागि उत्तम बनाउँदछ। यो टेलिभिजन मुनि राख्न सकिन्छ, एक टेबुलमा समर्थित, वा भित्तामा स्तब्ध गर्न सकिन्छ, जसको लागि तपाईंले अतिरिक्त समर्थन किन्नु पर्छ जुन बक्समा समावेश छैन। योसँग कुल ११ वक्ता (twe ट्वीटर, wo वूफर) र ११ कक्षा डी एम्पलीफायरहरू छन्। यी स्पिकरहरू उत्तम डोल्बी एटमस ध्वनि उत्पादन गर्ने बारेमा अभिमुखी सोच छन्। यो साउन्डबार होइन जुन "नक्कल गर्दछ" वा सफ्टवेयर अपडेटले डोल्बी एटमसलाई दिएको छ, तर यसको लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको हो।
जडानको मामलामा, यससँग इथरनेट र वाइफाइ जडान (802.11०२.११ बी / जी) छ, साथै एकल HDMI २.० जडान ARC र eARC का साथ उपयुक्त छ (हामी पछि टिभीसँग यसको सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्नेछौं)। यदि तपाईं ध्वनी कनेक्ट गर्न अप्टिकल केबल प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने, कुनै समस्या छैन, बक्समा एक एडाप्टर समावेश गरिएको छ, तर तपाईं डल्बी एटमस ध्वनि हराउनुहुनेछ। यसका चार माइक्रोफोनहरूले तपाईंलाई यसलाई भर्चुअल सहायकहरू स्थापना गर्न सकिन्छ कि प्रयोग गर्न भोक निर्देशनहरू दिन अनुमति दिन्छ: गुगल सहायक र एलेक्सा। Dolby Atmos बाहेक, यसले Dolby TrueHD र अन्य अधिक पारम्परिक ढाँचाहरूलाई समर्थन गर्दछ।
यसको डिजाइन घरको ट्रेडमार्क हो, एक घुमाइएको ग्रिलको साथ जसले सोनोस आर्कको सम्पूर्ण सतह फ्याँक्दछ, 75.000 XNUMX,००० भन्दा बढी प्वालहरू द्वारा छिद्रित र केवल सोनोस लोगोले अगाडिको सतहको एकरूपता तोड्दछ। सबै Sonos उत्पादनहरू जस्तै शान्त, रमणीय र कालातीत। हामी यो विश्लेषणमा देख्न सक्ने ब्ल्याक स्पिकरको साथसाथै हामीसँग यसलाई सेतोमा खरीद गर्ने विकल्प पनि छ। तल्लो भागमा, दुई सिलिकॉन खुट्टाले टेबुलमा राम्रो पकडको अनुमति दिन्छ, र कम्पनहरू बेवास्ता गर्दछन्, यस प्रकारको उपकरणमा आवश्यक छ।
यो Sonos लोगो माथि एक सानो एलईडी छ, जो जडान स्थिति इंगित गर्दछ, जब हामी भर्चुअल सहायक शुरू, वा जब हामी ध्वनि बार मौन छ। हामीसँग मात्रा र प्लेब्याक नियन्त्रण गर्न तीन टच बटनहरू पनि छन्। यसले भर्चुअल सहायकलाई निस्क्रिय गर्न दायाँ पट्टीमा टच बटन पनि छ, जुन यसको स्थिति जान्न एलईडीको साथ हुन्छ। जडानहरू पछाडि छन्, पावर बटनको छेउमा। एउटा महत्त्वपूर्ण विवरण: HDMI केबल बक्समा समावेश छ, जुन केहि सामान्यतया धेरै सामान्य हुँदैन।
Sonos आर्क बार HDMI केबल प्रयोग गरेर टिभीसँग जोड्छ, जुन तपाईंको TV मा HDMI ARC / eARC जडानमा जान्छ। यसको मतलब यो हो कि तपाईं कुनै पनि सामानहरू सिधै बारमा जडान गर्न सक्षम हुनुहुने छैन, तर तपाईंको टिभीबाट आउने सबै आवाज Sonos आर्कमा जान्छ। यसको यसका फाइदाहरू र बेफाइदाहरू छन्, यद्यपि मेरो अवस्थामा म आफैंलाई यो विकल्पको सकारात्मक बिन्दुको पक्षमा अधिक परिभाषित गर्दछु। मुख्य कारण यो छ कि तपाईं आफ्नो टिभीमा पुन: उत्पादन के हुन्छ भनेर चिन्ता गर्नुहुन्न, तपाईंलाई हब वा अन्य सामानहरू आवश्यक पर्दैन किनकि तपाईं उपयुक्त जडानहरू सकिसक्नुभयो। तपाईं यसको माध्यमबाट डीटीटीको सामग्री सुन्न सक्नुहुन्छ।
तर यसको मतलब यो छ कि तपाईंको टिभी यसको प्रयोग गर्न सक्षम हुनको लागि तुलनात्मक रूपमा आधुनिक हुनुपर्दछ। एचडीएमआई एआरसी कुनै समस्या हैन, किनकि धेरै जसो टेलिभिजनले यसलाई समावेश गर्दछ, तर एचडीएमआई ईएआरसी हो, जुन अझ धेरै व्यापक सम्बन्ध छैन। HDMI ARC मार्फत तपाईं उत्कृष्ट ध्वनि सुन्न सक्नुहुन्छ, तर १००% वास्तविक Dolby Atmos, केहि नजीक केहि छ जुन साँच्चिकै राम्रो लाग्छ, तर वास्तविक होइन। HDMI eARC को साथ तपाईं Sonos आर्कले दिन सक्ने उत्तम आवाजको मजा लिन सक्नुहुन्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको टेलिभिजनमा समावेश भएको किसिमको प्रकारलाई ध्वनिको कुन गुणस्तरमा तपाईं पुग्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुराको लागि थाहा छ।
ध्वनि बारको नियन्त्रणको लागि, तपाईं आफ्नो टेलिभिजनको रिमोट कन्ट्रोल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको एप्पल टिभीको सिरी रिमोटको पनि। तपाईले केहि गर्नुपर्दैन, तपाईले केहि कन्फिगर गर्नुपर्दैन, तपाईले सोनोस आर्कलाई आफ्नो टेलिभिजनमा जडान गर्नुपर्नेछ, र तपाईले नियमित प्रयोग गर्ने रिमोट कन्ट्रोल लिनुपर्नेछ। साउंडबारको भोल्यूम बढाउन र कम गर्न सक्षम हुन। त्यहाँ सेकेन्डको केहि दशमौंको न्यूनतम ढिलाइ छ, केही बिल्कुल किस्साको रूपमा कि तपाइँको टेलिभिजनको लागि यो सहायक प्रयोगको शानदार अनुभवलाई परिवर्तन गर्दैन।
तपाईंको घरमा सिनेमा ध्वनि
Sonos आर्क को ध्वनि गुण प्रश्न बाट परेको छ, किनकि यो एक उच्च-अन्त ध्वनीबारमा हुनुपर्दछ। तपाईं आफ्नो चलचित्र र श्रृ of्खलाको आवाजको सबै विवरणहरूको आनन्द लिनुहुनेछ, धेरै राम्रो बास र आवाजका साथ जुन तपाईं शोर कष्टका दृश्यहरूमा पनि स्पष्टसँग सुन्न सक्नुहुन्छ। यो त्यस्तो चीज हो जुन अन्य सस्तो उपकरणहरूबाट बाहिर आउँदछ, साथै तपाईंको एप्पल टिभीसँग लि linked्क गरिएको दुई होमपडहरूको विकल्पको साथ।। तपाईं केवल Sonos आर्कको साथ प्राप्त वरपरको ध्वनि वास्तवमै राम्रो छ, जो वक्ताहरूको साथ आफ्नो बैठक कोठा भर्न नचाहनेहरूको लागि उत्कृष्ट विकल्प हो।
हाम्रो आईफोनको लागि सोनोस अनुप्रयोगबाट हामी केही विकल्पहरू प्रयोग गर्न सक्दछौं ध्वनी सुधार्नको लागि, वा बरु, यसलाई प्रत्येक अवस्थामा अनुकूल बनाउनुहोस्। Sonos आर्कमा ट्रुप्ले छ, एक विकल्प जसले तपाईको आईफोनको माइक्रोफोन प्रयोगको लागि धन्यवाद मा भएको आवाज कोठा लाई रूपान्तरण गर्दछ। तर पनि तपाईं दुई धेरै चाखलाग्दो विकल्पहरू सक्रिय गर्न सक्नुहुनेछ जस्तो रात मोड र सुधारिएको सम्वाद। पहिलो भोल्युम कम नगरी चर्को आवाजहरू कम गर्न, र दोस्रो कुराकानी स्पष्ट पार्न, एक्शन चलचित्रहरूको लागि आदर्श हो।
तपाईंको ध्वनी प्रणालीको परिमार्जन र विस्तार Sonos को विशेषता हो, र यो Sonos आर्कको साथ यो पक्षको महत्त्वपूर्ण बिन्दु हुन जारी छ। आफैंले यसले हामीलाई एउटा भव्य ध्वनि प्रदान गर्दछ, तर यदि तपाइँ सोफाको छेउमा सोनोस वन जस्ता दुई उपग्रहहरू थप्न सक्नुहुन्छ वा सोनस सब जस्ता बास एम्प्लीफायर थप्न सक्नुहुन्छ।, ध्वनि अनुभव अझ राम्रो बनाउनको लागि। र यी सबै ताररहित, तपाइँको Sonos अनुप्रयोग मा मेनू को एक जोडी प्रेस द्वारा।
अमेजन अलेक्सा, गुगल सहायक र एयरप्ले २
साउन्ड बारको रूपमा यसको प्रयोगको साथसाथै हामीसँग अन्य विकल्पहरू पनि छन् जुन यस उपकरणको मूल्य बढाउँछन्। हामी Google वा अमेजनबाट भर्चुअल सहायकहरू स्थापना गर्न सक्दछौं, हाम्रो बैठक कोठामा एक स्मार्ट वक्ताको लागि। तपाईं यी सहायकलाई के गर्न सक्नुहुन्छ? ठ्याक्कै, तपाईले कुनै पनि पारम्परिक स्मार्ट स्पिकरसँग गर्नुहुन्छ: तपाईंको स्ट्रिमि service सेवाबाट संगीत सुन्नुहोस्, गृह स्वचालन नियन्त्रण गर्नुहोस्, पोडकास्ट वा प्रत्यक्ष रेडियो सुन्नुहोस्, तपाईंलाई चाहिने आवश्यक जानकारीको लागि सोध्नुहोस् ... र साथै, तपाईंको टिभी खोल्नुहोस् वा वा बन्द गर्नुहोस्, र भोल्यूम नियन्त्रण गर्नुहोस्।
र सिरी? ठीक छ, सिरी यस Sonos आर्कमा स्थापना गर्न सकिँदैन, तर हो, तपाईं सामग्री पठाउन सक्नुहुनेछ एयरप्ले २ अनुकूलतामा धन्यवाद। यसको मतलब यो ध्वनि बार तपाइँको गृह अनुप्रयोगमा सामेल हुनेछ, र तपाइँ Sonos आर्कमा ध्वनि पठाउन यससँग (आईफोन, आईप्याड, होमपड…) भएको कुनै पनि उपकरणबाट सिरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं मल्टरूम को उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ, वा अन्य एअरप्ले स्पिकरहरूको साथ समूह सबैमा पूर्ण रूपमा समक्रमित संगीतको साथ।
तपाइँको Sonos आर्क मा संगीत
यस तरिकाले Sonos आर्क यो केवल तपाईंको टेलिभिजनको सामग्री सुन्न मात्र प्रयोग गरिदैन, संगीत सुन्न पनि तपाईंले प्रयोग गर्नुहुने कुनै पनि सेवाको उपयोग गर्दै। एप्पल संगीत, यो अमेजन अलेक्सामा वा एयरप्ले २, स्पोटिफाई वा Sonos अनुप्रयोगमा समावेश गरिएको कुनै पनि स्ट्रिमि music संगीत सेवाहरू मार्फत समावेश गरिएको तथ्यलाई धन्यवाद छ र तपाइँ आफैं अनुप्रयोगबाट नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ।
Sonos आर्क मार्फत संगीतको गुणस्तर उत्कृष्ट छ, यद्यपि यसले अन्य उच्च-अन्त स्पिकरहरूसँग यत्तिको फरक नपार्दछ जब हामी चलचित्रहरू वा श्रृंखलाहरू सुन्छौं। स्टेरियोमा दुई होमपडहरूले यो Sonos आर्कको जस्तो ध्वनि प्रदान गर्न सक्दछन्, जुन केहि नकारात्मक छैन, बिल्कुल विपरीत।। Sonos आर्क उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दछ जब यो सिनेमा आउँदछ, र उत्कृष्ट जब यो संगीतको कुरा आउँदछ।
डल्बी एटमस, एयरप्ले २ अनुकूलता, अलेक्सा वा गुगल सहायक प्रयोग गर्ने सम्भावना, र मोडोरलिटी र विस्तार सम्भावनाहरूको साथ जुन सोनोसले यसको स्पिकरमा प्रस्ताव गर्दछ, यो सोनोस आर्क कुनै श doubt्का बिना तपाईले भेट्न सक्ने सबैभन्दा पूर्ण र चाखलाग्दो ध्वनिबारमा छ। बजार यसको मूल्य उच्च लाग्न सक्छ, तर यदि हामी यसलाई अन्य साउन्ड बारहरूसँग तुलना गरौं जुन डल्बी एटमस प्रस्ताव गर्दछन्, यो हामीलाई सस्तो लाग्न सक्छ, र त्यो अन्य सुविधाहरू गणना नगरीकन केहि कम (वा कुनै पनि) हामीलाई प्रदान गर्दैन। हामी यसलाई अमेजनमा € 899। मा किन्न सक्छौं (लिङ्क).
एलेक्सा र गुगल सहायक
Dolby Atmos र Dolby TrueHD
HDMI केबल र अप्टिकल एडाप्टर समावेश छ
अन्य Sonos उत्पादनहरूको साथ विस्तारको सम्भावना
एयरप्ले २ सँग मिल्दो
सबवुफर समावेश छैन
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » Sonos आर्कको विश्लेषण, बजारको सब भन्दा पूर्ण ध्वनीबार